Xildhibaan Idiris “Aqalka Sare Waxa uu gabay Shaqadii loo Idmaday” – Kalfadhi
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar, oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul ugu eedeeyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, in uu gabay shaqdii ay u igmadeen Maamuladda ay matalaan “Aqalka sare waxa ay gabeen howlihii ay wakiilka uga ahaayeen Maamul Gobaleedyada dowladda dhexe, waxa ayna faraha kula jiraan shaqadii Golaha Shacabka” ayuu yiri xildhibaan Idiris.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar, ayaa sheegay in inta badan ay dagaalo ka jiraan degaanadii laga soo doortay, Xubnaha Aqalka Sare, oo ay xukumaan Maamul Gobaleed yada ay wakiilka uga yihiin dowladda, waxa uuna sheegay in loo baahnaa in ay ka shaqeeyaan xal u helidda dagaaladaasi “Aqalka Sare kama hadlayo dhibka ka taagan gobaladda iyo dadka dhimanayo” ayuu yiri Xildhibaan Idiris.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar, ayaa sheegay in markii horaba aan loo dhisin Aqalka Sare, si cadaalad ah, oo ay ku jirto danta umadda “dadka kasoo Jeeda Konfur Galbeed, oo ah dad aad u farabadan waxaa Aqalka Sare laga siiyay tiradda ugu yar waana sad bursi” ayuu yiri xildhibaan Idiris.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar, ayaa ugu baaqay xubnaha Aqalka Sare in ay dib iskugu noqdaan oo ay xasuustaan shaqadii ay lahaayeen si ay u wada shaqeeyaan labadda Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya “Aniga lama socdo wax Khilaaf ah lakiin Aqalk Sare howshiisa ha aqoonsado” ayuu yiri xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar.
Labadda Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxaa ka dhaxeeya khilaaf xoogan oo aan qarsoonayn, waxa ayna Aqlka Sare horay u shaaciyeen in ay xiriirkii u jareen Golaha shacab ka, labada Aqal oo ay ahayd in lafuro kalfadhigooda 10kii bishan ayaa ilaa hadda xiran.